HomeKit: inona izany ary vokatra farany mifanaraka aminy - iPhone News | Vaovao IPhone
HomeKit (Casa ao amin'ny App Store any Espana) dia fampiharana izay mampifangaro ireo vokatra sy marika mifanentana isan-karazany fehezo amin'ny feo ny tranonao. Ny fihetsika toy ny fandrehitra ny jiro, ny fijerena ireo faladianao no ampahavitrihana na raha misy varavarana misokatra dia azo atao noho izany paoma fampiharana.
Nasongadinay fa azo ampiasaina amin'ny fitaovana Apple rehetra ity app ity: iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod ary Mac.
Mba hahatratrarana izany, ny zavatra voalohany dia hanana fitaovana mandeha ho azy ao an-trano, toy ny jiro mifanaraka amin'ity app ity. Ka raha miteny ianao hoe "Hey Siri, vonoy ny jiro," "velomy ny termostat", na "ampidino ny fahitalavitra," dia hankato anao avy hatrany izany.
Ireto ny sasany amin'ny fampiasana azonao atao mba hifehezana ny vokatrao hendry dia ireto:
Fametrahana mozika amin'ireo mpandahateny amin'ny efitrano manokana
Alefaso na vonoy ny switch
Apetaho na esory ny termostat
Sokafy na akatona ny varavaran'ny garazy anao
Fehezo ny aircon, TV, windows ...
Ankoatra ny fanondroana baiko amin'ny alàlan'ny feo dia hanana fitantanana tsara kokoa ny tranontsika koa isika, izay afaka manampy antsika, ohatra, hitsitsy bebe kokoa amin'ny herinaratra. Azontsika jerena raha manana jiro, fahitalavitra na plug isika mba hifehezana ny fampiasana omentsika mba tsy hanararaotana.
Izy io dia manana fampifanarahana feno amin'ny iray amin'ireo fitaovana mampiasa iOS, indrindra raha havaozina amin'ny tsimbadika farany, sy Apple TV andiany fahefatra na avo kokoa.
Izy io dia manana interface interface intuitive sy tsotra aiza, miaraka amina boaty izay miseho fotsy no mampitandrina fa misy mavitrika, azonao atao ny mitantana raha te hanana jiro na maty ianao, na raha namela varavarana na varavarankely misokatra ianao. Ilaina ihany koa ny mahatsapa ho voaro ao an-tranonao ary mahafantatra fa tsy nanadino ny nanidy na inona na inona ianao (efa fantatray fa mamitaka ny maika).
Raha te hahalala ny vaovao farany momba ny fampiharana HomeKit, miaraka amin'ireo endri-javatra miavaka indrindra sy ireo vokatra mifanentana aminy, azonao atao ny mamaky ny ora farany etsy ambany.
Ho hitantsika ireo fitaovana mandeha ho azy CHIP voalohany mifanaraka amin'ny Apple, Amazon ary Google amin'ity taona ity
ny Toni Cortés hace Herinandro 3 .
Eo amin'ny làlana tsara izahay hanatontosana ny rafitra automatique an-trano. Ny consortium an'ny mpanamboatra fitaovana automatique an-trano CHIP, miaraka amin'ny ...
Ny mpandrindra ny fampiharana fototra ho an'ny mpampiasa HomeKit (HomeRun sy HomePass ankoatry ny hafa) dia nanangana fampiharana vaovao ...
Notsapainay ny switch switch Meross mifanaraka amin'ny HomeKit
Notsapainay ny jiro roa lalana Meross, mifanaraka amin'ny HomeKit, Alexa ary Google Assistant, tonga lafatra amin'ny famolavolana ny jiro ...
Eva dia mpiara-miasa amin'i Coulisse hamorona jiro marani-tsaina isan-karazany
Raha ny momba ny fibaikoana ny tranontsika dia manana vokatra marobe mamela anay hifehezana ...
Ny fampiharana HomeKit an'ny antoko fahatelo "Home + 5" dia havaozina
Ny rindranasan'ny zanatany izay ahitana ny rafitra fiasan'i Apple dia, ndao lazaina, "marina sy mandeha." Manao tsara ny asany izy ireo, ...
HOOBS mitondra anao HomeBridge maimaim-poana
HomeBridge no vahaolana mety indrindra hanampiana kojakoja amin'ny HomeKit izay tsy tohanana amin'ny fomba ofisialy, fa ny…
Nuki dia mamoaka bateria azo averina indray ho an'ny hidiny mifanentana amin'ny HomeKit
Androany isika dia afaka mahita vokatra marobe mifanentana amin'ny HomeKit izay ahafahantsika mibaiko ny tranontsika ...
VOCOlinc MistFlow, fanalefahana ary fanamafisam-peo mifanentana amin'ny HomeKit
VOCOlinc dia nandefa moisturizer vaovao izay mitondra ny tanky rano lehibe kokoa ho ...
Ny app Eve's HomeKit dia mifanaraka amin'ny Apple Silicon ankehitriny
ny Toni Cortés hace 5 volana .
Ny mpanamboatra kojakoja malaza HomeKit Eve, dia nanambara fa ny fampiharana azy dia mitsambikina avy amin'ny iPhones sy iPads mankany ...
Ikea dia manitatra ny vokatra mifanaraka amin'ny HomeKit
Tsikelikely Ikea dia manampy ny sasany amin'izy ireo mifanaraka amin'ny rafitra HomeKit an'ny Apple ao amin'ny katalaogin'ny vokatra. Hatramin'ny…
ny Luis Padilla hace 6 volana .
Ny fametrahana rafitra fanaraha-maso horonantsary dia mora kokoa noho ny hatramin'izay noho ny HomeKit Secure Video, ary koa mora vidy tsy misy ...